Chen Lu itsva inodzivirira kutungamirira rabha chivharo inogona customized mamwe nerokuti - China Shandong Chen lu
Chen Lu itsva inodzivirira kutungamirira rabha chivharo inogona customized mamwe nerokuti
chiito: Radiation kudzivirira
Zviri HA10 vatungamirire guruu chivharo:
Lead nerokuti: 0.35 MMPB, 0.5mmpb; Kana zvimwe unodzivirira nerokuti.
Radiation unodzivirira chivharo: kushandiswa kudzivisa kuzotadzira X mwaranzi kusvikira musoro yevanhu;
Magadzirirwo: mureza unodzivirira chivharo;
Kukura ranzi runodzivirira chivharo: avhareji kukura uye chinjika mhando;
Ruvara mwaranzi ngowani: 12 mureza mavara kusarudza kubva;
Shandong Chen Lu zvokurapa chiridzwa co., LTD ari nyanzvi unodzivirira zvipfeko vagadziri, kupfupisa chinhambo zvibereko kuti mutengi zvakananga, saka mutengo uri zvaunoda, kurongeka uwandu, zvikuru zvikuru zvakanaka mari ndiko, nokuti mashoko, tapota ubvunze !
Previous: The itsva mhando mutobvu unodzivirira mumuhara haana ruoko
Next: Anti-X ranzi ngaatarire / musiyano wezvinyorwa kutungamirira kudzivirira thyroid
Anti-nemwaranzi kutungamirira gel chivharo